Sina Certification & Inspection (Group) Fujian Co., Ltd.
Firafitry ny fandaminana
Mialoha ny famokarana Inspection
Nandritra Production Inspection
-Fandefasana mialoha Inspection
Fitoeran-javatra Loading Fanaraha-maso
Karazana serivisy fanaraha-maso
Fanaraha-maso ny trano Manampy anao hahalala ny mpamatsy iray , ny ao anatin'izany ny . rafitra fanaraha-maso kalitao, fitantanana ary fitantanana fomba.
Fanaraha-maso mialoha ny famokarana Alohan'ny famokarana , ny fanampiana `ary ianao ho azo antoka ny akora sy ny components will meet your specifications and are available in quantities sufficient to meet the production schedule.
Mandritra ny fitsirihana ny famokarana (DPI) Nanamarina ny vokatra mandritra ny dingana famokarana sy ny miezaka ny tsara indrindra mba hisorohana ny sasany kilema niseho, Afaka manampy anao koa ny mijery ny vokatra fandaharam-potoana sy hanaraka fa ny entana dia vonona raha ny fotoana ny entana .
Fanaraha-maso mialoha ny fandefasana entana (PSI) Izy io dia tena mahomby maso izay manamafy ny sambo iray manontolo ny kalitao ambaratonga. Matetika ny famokarana dia tokony ho 100% feno ary farafahakeliny 80% ny entana harotsaka ao anaty baoritra Ireo voamarina dia voafantina voafantina araky ny fenitra AQL.
Manara-maso ny fanaraha-maso Izy io dia manan-danja nandritra ny lahateny dingana dingana, Mety hahazoana antoka ny vokatra dia marina-pamatrarana ary mampihena ny mety hisian'ny breakage. Ny fiantohana ny kalitao sy ny toetran'ny vokatrao mandra-paharainao azy ireo.
Fa maninona aho no mila manao fisafoana na fanamarinana amin'ny orinasa?
Raha misy lesoka ratsy sy tsy marina, fampahalalana tsy marina avy amin'ny mpamatsy mandritra ny varotra iraisam-pirenena. Ny fisafoana no fomba mahomby indrindra hiarovana ny tombotsoan'ny mpividy.
Inona no hitanao mandritra ny fisafoana?
Ny vokatra samihafa dia hanana teboka fanaraha-maso samihafa. Ka ny sokajy fanamarinana dia hodinihina am-pitandremana tsara eo anelanelan'ny mpanjifa sy ny mpitantana ny kaonty.
Amin'ny ankapobeny, eto ambany ny
2. Famaritana vokatra /
4.Fampiasa asa /
fitsipi-pianarana 5. Fanamarinana / fanamarihana fanamarihana
6.Pametram-pamoahana ho an'ny rakitra
7.Ny fepetra manokana natokana ho azy.
Manao ahoana ny taham-panadinana?
Ny taham-pahavitan'ny fanaraha-maso rehetra dia USD 168-288 isaky ny andro isan'andro amin'ny ankamaroan'ny tanànan'i Shina afa-tsy Hongkong, Taiwan. Ity salan'isa mahazatra ity dia mahatratra hatramin'ny 12 ora fiasana isaky ny asa (anisan'izany ny fitsangatsanganana, ny fisafoana sy ny fanomanana ny tatitra) Tsy misy famerenany vola be ny fandaniana ny fitaterana sy trano fandraisam-bahiny.
Ahoana ny fomba hanombohan'ny fisafoana?
Alefan'ny mpanjifanay ny taratasy famandrihana ary manoratra ny 2-3 andro mialoha. Izahay dia mifandray amin'ny Factory mba hanamarina ireo antsipirian'ny fisafoana. Manamarina ny drafi-panaraha-maso sy karama ny mpanjifa. Izahay dia manao ny fisafoana sy ny mpanjifa hahazo ny tatitra fisafoana ao anatin'ny 24 ora.
Adiresy: Floor 20, No. 75, East Jiangbin Avenue, Mawei District, Fuzhou, Fujian, Sina